Ejypta: Mampiasa Teknolojia Hampisehoana Ireo Tompon’Andraikitra Tamin’ny Fampijaliana, Sy Ny Herisetran’ny Polisy · Global Voices teny Malagasy
Ejypta: Mampiasa Teknolojia Hampisehoana Ireo Tompon'Andraikitra Tamin'ny Fampijaliana, Sy Ny Herisetran'ny Polisy
Voadika ny 03 Jona 2017 4:52 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, عربي, English
(Fanamarihana: Nivoaka tamin'ny volana Aogositra 2010 ny lahatsoratra tamin'ny teny anglisy)
Mampiato ny zon'ny tsirairay ny lalàna firenena latsaka ankaterena mampalahelo ao Ejipta ary manome fahefana tsy voafetra ho an'ny mpitandro ny filaminana hanao fisamborana, famotorana tsy ara-dalàna sy hanenjika izay manana fomba fijery tsy ankasitrahana. Matetika tsy voasazy ireo polisy mpanao herisetra sy fampijaliana, saingy tsy hijanona hiraviravy tanana fotsiny ireo bilaogera Ejiptiana sy ny tanora mpahay teknolojia.
Sary mandrakitra ny herisetran'ny polisy tao amin'ny bilaogy Fampijaliana ao Ejypta. Zon'ny mpamorona: Creative Commons 2.5 NC-ND license.
Ny bilaogyTorture in Egypt (Fampijaliana ao Ejypta) dia miasa ho toy ny foiben'ny olona tsirairay sy ireo hetsika miresaka fampijaliana sy herisetran'ny polisy. Manome vaovao farany sy tatitra, horonan-tsary, fijoroana vavolombelon'ny niharam-boina, antontan-taratasy ara-pitsarana, antontan-taratasin-draharaha, fanambaran'ny ONG, fitanisan-keloka ataon'ireo polisy manamboninahitra efa misotro ronono, ary rohy mankany amin'ireo boky sy taratasy miresaka ny lohahevitra. Manolotra fanampiana ho an'ireo mpikaroka momba ny zon'olombelona sy ireo ​​mpikaroka ihany koa izy ary manome azy ireo loharanom-baovao mampahafantatra ny asan'izy ireo.
Niafara tamin'ny fahafatesan'i Khalid Saeed, olom-pirenena Ejyptiana izay maty voadaroky ny polisy roa tao Alexandria ny loza mahatsiravina vao haingana. Tezitra ireo Ejyptiana ary nikarakara fitakiana goavana antserasera mba hosaziana noho ny heloka vitany ireo mpamono olona. Nanoratra lahatsoratra am-polony ireo bilaogera, ary nisy ny pejy Facebook natsangana, niezaka nampalaza ny anaran'i Saeed tao amin'ny Twitter ireo mpiserasera mba hanao fanentanana. Fihetsiketsehana maro no nokarakaraina, anisan'izany ny fihetsiketsehana mangina tao ivelan'ny Minisiteran'ny Atitany mba hitakiana ny rariny. Nanosika ireo antoko politika mba hamoaka fanambarana ofisialy mikasika ny raharaha izany. Bilaogy maro no mbola ahitana teny faneva mampahatsiahy ireo mpamaky fa izy ireo no mety ho Saeed manaraka.
Wael Abbas, bilaogera sady mpikatroka ambadiky ny Misr Digital, no nampalaza ny tenany tamin'ny famoahana lahatsary tafaporitsaka izay ahitana ireo tranga fampijaliana nataon'ny polisy, sary mampihorokoditra ny sasany. Nandefa mivantana ireo fihetsiketsehana teny an-dalamben'i Kairo ihany koa i Abbas. Matetika izy mamoaka antontan-taratasy sy sary mampiseho ny kolikoly na ny hosoka. Nahazo loka iraisam-pirenena maro sy fisehoana tamin'ny fahitalavitra tao amin'ny Al Jazeera sy ny BBC ny asany. Vao haingana izy no nosokajian'ny Arabian Business Magazine ho iray amin'ireo Arabo 100 manana herim-panintonana indrindra.
Saritany Ifarimbonana momba ny Fampijaliana
Fampiasàna teknolojia iray miavaka ny sary Flickr antsoina hoe Piggidpedia موسوعة الجلادين, izay ahitana sary 250 mahery misy ireo polisy, ny sasany amin'izy ireo dia voampanga ho nanitsakitsaka ny zon'olombelona. Tantanin'ireo bilaogera Ejypsiana maromaro ny vondrona, ary misokatra ho an'ny rehetra ny fandraisana anjara sy ny sary. Manome sarintany ifarimbonana ny Torturemap.info, izay ahitana tatitra momba ny fampijaliana ao amin'ny toerana samihafa ao Ejypta. Ahafahan'ny mpiserasera mitatitra izay tranga fampijaliana vaovao rehetra ihany koa izany mba hanomezana fanehoana hita maso momba ireo fanararaotana ireo. Manamora ny fikarohana momba ireo fampijaliana sy herisetra isan-karazany amin'ny toerana voalaza na tanàna ao Ejypta ihany koa izany.
Nahavita nampiasa maimaim-poana ireo fitaovana misy sy ny tolotra antserasera ireo bilaogera, mpikatroka sy mpahay teknolojia ireo mba hahasadaikatra ny governemanta Ejypsiana sy manery azy handray fepetra manoloana ireo fanararaotana ireo. Amin'ny fanaovana izany, nametraka ohatra mamirapiratra ho an'ireo fikambanana sy olon-tsotra miasa mampiroborobo ny mangarahara sy ny fandraisana andraikitra ao amin'ny faritra Afovoany Atsinanana Afrika Avaratra sy manerantany izy ireo.